Tours Zohery - Dalxiiska Dalxiiska Washington DC
Dalxiiska Dalxiiska ee Washington DC
Safarka Weyn ee Washington DC
Maalinta Buuxa ee Washington DC & Safarka Mount Vernon
Safarka Weyn ee Washington DC & Qubuuraha Arlington
Safarrada Habeenka ee Washington DC
Safarka Mount Vernon + Safarka Habeenka ee Washington DC
Socdaalka gaarka ah ee DC
Dalxiisyada Waxbarasho ee Ardayga
Dalxiisyada Khadka Tooska ah
Basaska iyo baabuurta iibka ah
Kiraystaha Hagaha Dalxiiska ee DC
Noqo A DC Tour Guide $100 todobaadkii
Booqashada Washington DC Tours
Ku soo dhawoow Zohery Tours - Dalxiiska Washington DC
Zohery Tours waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee bixiya safarrada Washington DC. Waxa ay ku jirtay ganacsi ku dhawaad ​​30 si ay uga farxiso kumanaan dalxiisayaal ah oo ka imaanayay geesaha aduunka. DC waa magaalo gaar ah oo ka tarjumaysa waayihii hore ee dalkan iyada oo dhammaan taallooyinkeeda ay leeyihiin taariikh u gaar ah.
Dalxiisyada Zohery waxaad ka helaysaa khibradda dalxiis ee ugu dambeysa ee DC. Waxaan ku tusinaa wax ka badan dhismayaasha iyo taallada caasimadda qaranka. Waxa aad galaysaa safar taariikhi ah oo aad ku ogaanayso halka ay sharci-dajiyayaasha iyo ruxruxayaasha magaaladu sameeyaan waxa ay qabtaan. Halka lacagtaada lagu daabaco. Halkaas oo ay ku cibaadaysanayeen Madaxweynaha iyo madax kale. Meesha VIP-du ay qadadooda ku cunaan, ama ku ordaan, ama ku socdaan nasashada subaxda.
Qaar ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee aad ku arki doonto socdaaladayada dc waa: Aqalka Cad, Capitol-ka US, Memorial Jefferson, Lincoln Memorial, Xusuustii Dagaalkii IIaad ee Adduunka, Xusuustii Martin Luther King, Saldhigga Midowga iyo qaar kale oo badan…
In aad nala qabsato dalxiis waxa ay noqon doontaa marinka aad ka gelayso safarkii hore iyo dib ugu noqoshada wakhtigan. Dalxiisyadayada waxaa ka sheekeeyay hage dalxiis toos ah kaas oo kuu sheegi doona sheekooyinka ka dambeeya calaamad kasta oo magaalada ah. Iyada oo wax badan oo la sahaminayo iyo waqti aad u yar, waxaan kuu naqshadeynay xirmooyin dalxiis oo ku habboon inta badan. Waxaan leenahay safar maalinle ah - Dalxiiska Weyn ee Washington, DC - iyo safar fiidkii - Washington Ka dib mugdiga. Iyo kuwa door bidaaya inay ka baxaan wadooyinka la garaacay, waxaan leenahay adeeg dalxiis oo gaar ah oo loo habeyn doono hadba baahidaada iyo doorbidkaaga.
Soo fuul oo waxaa lagugu dawayn doonaa safar-maalin waxbarasho oo DC ah, nooca safarrada xusuusta weyn laga sameeyo.
Goobta laga soo qaadayo
laga bilaabo 400 block New Jersey Avenue, oo ku taal geeska D wadada NW Washington DC 20001
Xuquuqda daabacaadda © 2022 · Zohery Tours